BlackBerry mbụ mmiri ga - ewepụta na Ọktọba | Gam akporosis
The BlackBerry «Krypton» ga-ọkọnọ ke October na mmiri na-eguzogide
TLC, nke nwere ikikere mmeputa maka akara aka nke BlackBerry, kwuputara ọkwa ama ama ama ama ama mbụ nke Canada nke ga - enweghị mmiri.
TLC bụ conglomerate nke China na onye na - emeputa ngwa ngwa nke BlackBerry smartphones maka afọ ole na ole. Agbanyeghị na 2017 anyị ahụla otu ọnụ ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ndị nnọchi anya Asia nọ na ngosi ahụ IFA 2017 ikpughe otu akụkụ nke atụmatụ ha maka njedebe nke afọ a.
N'ụzọ dị otú a, anyị chọpụtara na a ga-ebido BlackBerry mbụ mmiri na-amalite na October nke afọ a, a ga-arụ ya na ihuenyo mmetụ aka, ya bụ, ọ gaghị enwe keyboard nkịtị maka ngwa BlackBerry nke afọ ndị na-adịbeghị anya. . Izugbe nke ọnụ ga-adị ka atụmatụ nke NKM 50 y NKM 60, ma nkọwa metụtara ya imewe ga-kpamkpam dị iche iche.
Agbanyeghị na ewepụtaghị nkọwa niile nke ngwaọrụ a, François Mahieu mere ọtụtụ mkpughe mara mma maka ọnụ ụzọ ahụ Engadget. Onye nnọchi anya TLC kwuru na BlackBerry na-esote ga-asọpụrụ ọdịnala nke ika Canada ma bụrụ onye adịchaghị ama na-eguzogide ọgwụ, ezigbo maka ndị na-agagharị mgbe niile. E wezụga ihuenyo mmetụ, gadget ga-eweta Asambodo IP67 na nnwere onwe ya ga-abụ awa 26 nke agwakọta agwakọta.
Site na echiche Mahieu, ogologo oge na ogologo ndụ nke gadget ga-anọchite anya arụmụka kachasị mkpa maka inweta ya. O doro anya na ama ahụ ga-adị ike ma maa mma na ọbụlagodi ndị ọrụ Apple iPhone na Samsung Galaxy ga-achọ ịkwaga BlackBerry na Ọktọba.
Tụle na ndị ọhụrụ BlackBerry ụdị na-eme n'ọdịnihu ngwaọrụ wetara android, ọ ga-esi ezigbo ike igosi ha n'ihu ndị asọmpi gị. N'agbanyeghị nke ahụ, Mahieu nwere olile anya na ọkwa nchekwa nke ekwentị ahụ ga-anọchite anya mgbakwunye maka ndị ahịa.
Mobile, na koodu aha "krypton", O nwere ike inwe ọrụ akpọrọ Ọnọdụ nkeonwe, nke ga-enye onye ọrụ ohere ịmepụta akaụntụ abụọ dị iche iche, otu na ngwa niile dịịrị onye ọ bụla, na akaụntụ nke ọzọ na-enweghị ohere ịnweta ngwa ngwa gallery na akwụkwọ ndị ọzọ.
Ọ ka ga-ahụ ihe nhazi ngwaike nke BlackBerry ọhụrụ ga-abụ na oke ha ga-ahụ ya dị ka ihe dị mma na iPhone 8 ma ọ bụ 8 Galaxy Note.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » The BlackBerry «Krypton» ga-ọkọnọ ke October na mmiri na-eguzogide
Onye enyemaka Google ga-agbasawanye na ndị ọkà okwu ndị ọzọ na ngwaọrụ dị mma